Mogadishu Journal » Mareykanka iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay Arrinta Iran
Mareykanka iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay Arrinta Iran
Mjournal :-Iran ayaa madaxweynaha Mareykanka uga digtay in la geliyo dagaal ka qarxa Bariga Dhexe, waxayna sheegtay in weerar kasta oo lagu soo qaado ay ka bixin doonto jawaab ciqaab adag leh.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa sheegay in Trump, oo horey u amray cunqabateeno dheeri ah oo la saaro Iran, uu doonayo in xal nabadeed loo helo xasaradda.
Waxa uu hadlayey kadib wada-hadallo uu hogaamiyayaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka kala yeeshay weerarkii lagu qaaday xarumaha salidda Sacuudiga, kaasi oo Washington iyo Riyadh ay ku eedeeyeen Tehran.
Pompeo ayaa u muuqda inuu hadalkiisa dabciyey kadib wada-hadalladii uu la yeeshay dhaxal-sugaha Abu Dhabi, oo ah ninka ay ka go’ado talada Imaaraadka Carabta, oo ah isbaheysiga Carbeed ee ugu weyn ee Sacuudiga.
Askari ay ciidamada Booliska ku dileen magaalada Muqdisho